Crocus | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny aretina mandarin sy ny fomba handresena azy ireo
Ny aretina Citrus, izay an'ny mandarinina, dia somary voafaritra mazava tsara, ary amin'ny ankapobeny dia misy karazana voankazo maro. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny aretina azo avy amin'ny bitro dia vokatry ny mikraoba: mycoplasmas, viriosy, bakteria, fungi. Ny vokatry ny asany dia fahasimbana isan-karazany eo amin'ny hazo sy ny voankazo: fitomboana, fivontainana marevaka, rotaka, tsy fahampian-tsakafo, sy ny sisa.
Ny karazana trompetra mahazatra indrindra
Ny voan-kozatra dia azo antoka fa antsoina hoe mpandray anjara voalohany amin'ny lohataona, na dia misy karazan-kazo izay maniry amin'ny fahalavoana aza. Izy ireo dia an'ny fianakaviana iris ary ireo zavamaniry bitika isan-taona dia misy lokony isan-karazany. Ankehitriny dia misy karazany 300 eo ho eo amin'io zavamaniry io.
Tsiambaratelon'ny fambolena sy fiompiana ao an-trano
Amin'ny ririnina dia afaka mamorona rivotra iainana ao amin'ny efitrano ny fampisehoana malaza. Amin'ny fampiasana fomba manokana dia afaka manavao ny voninkazo amin'ny fotoana voafaritra, ohatra, amin'ny Taom-baovao. Ny fototarazo dia zavamaniry toy izany, fa ny fambolena sy fikarakarana azy ireo ao an-trano dia mila fahalalana sy ezaka.
Mambole sy mikarakara tsara ny foto-tsakafo
Ny voninkazo mahavariana mahavariana dia marefo. Manomboka maniry izy ireo amin'ny fiandohan'ny lohataona ary mankafy ny hafa amin'ny loko hatramin'ny folo andro. Taorian'ny nandosiran'ireo voninkazo ireo, ny felana dia mbola mamo sy mangatsiaka, fa amin'ny tapaky ny volana Jona dia ho avy ihany koa ny anjarany. Ankoatra izany, ny fitsingerenan-tsambo dia tonga fotoana fitsaharana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hambaranay ny zavatra rehetra mety hahaliana anao momba ny crocuses.
Zana-trondro maitso: ahoana ny fomba hitazonana ny volony ho an'ny ririnina ao an-trano?
Ny tsy mahazatra indrindra ao amin'ny fianakaviana Solanaceae - voatabia "tongotra Banana"
Ahoana ny fihazakazahana ombivavy mialoha ny fametahana
Amin'ny fomba ahoana ary oviana no tsaratsara kokoa ny famokarana jerena ao an-trano?
Ahoana ny fampiharana ny HB-101, ny vokatry ny zava-mahadomelina amin'ny zavamaniry
Inona no atao hoe gomaro ary aiza no ampiasaina
Ny tena zava-tsarotra amin'izao fotoana izao dia ny famokarana pepper ho an'ny zana-ketsa ao amin'ny Urals: ny fomba sy ny fotoana hambolena, ny nuance rehetra
Mora ny mitombo, misy tsirony - voatavo. F1 fipoahana: ny toetra sy ny fanoritsoritana ny karazany
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Crocus